Unganidzo Vagadziri - China Unganidzo Fekitori & Vatengesi
iPhone 12 yakateedzana Schott yakadzikama girazi skrini inodzivirira
Chii chinonzi Schott Girazi Mudziviriri?
IGerman SCHOTT Boka ikambani yemakambani epamusoro-soro boka rakagadzwa muna 1884. Makore zana nemakumi matatu ezviitiko zveindasitiri mumunda wegirazi rakakosha, zvigadzirwa uye tekinoroji yepamusoro. Uye ayo makuru nzvimbo dzebhizinesi dzinosanganisira: midziyo yemumba, mushonga, zvemagetsi, optics uye chekufambisa. SCHOTT Yakakwira-mhando mhando, inopwanya-isingadzivirire skrini yekudzivirira firimu inoitwa yeakaomesesa SCHOTT girazi muindastiri. Mukuita kwekuburitsa nharembozha yakatsamwa firimu, OTAO inoshandisa nzira mbiri yekusimbisa kusimudzira kusagadzikana kwegirazi. Yako nhare mbozha inogona kumira 25 tsoka Kupona kudonha mudenga, kuchengetedza foni kuti iite. Simba rayo rinopesana nekupwanya basa rinorova vazhinji vevanokwikwidza mumusika uye rinounza vatengi ruzivo rwakakwana.
iPhone 12 akateedzana Corning Gorilla akadzikama girazi screen mudziviriri
Chii chinonzi Corning Gorilla Girazi?
Gorilla Girazi mucherechedzo wemakemikari akasimbiswa girazi rakagadzirwa uye rakagadzirwa naCorning, ikozvino muchizvarwa chayo chechinomwe, chakagadzirwa kuve mutete, kupenya uye kusagadzikana. Sechiratidzo, Gorilla Girazi rakasarudzika kuCorning,